Qoor Qoor oo uga digay Villa Somaliya Weerar ay ku qaadaan Jeneraal Saadaq Joon | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qoor Qoor oo uga digay Villa Somaliya Weerar ay ku qaadaan ...
Qoor Qoor oo uga digay Villa Somaliya Weerar ay ku qaadaan Jeneraal Saadaq Joon
Xiisaddii xalay ka taagneyd qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee u dhaxeysay Jeneraal Saadaq Joon iyo ciidamo uu soo diray Farmaajo ayaa qabowday kadib dadaal uu sameeyey madaxweynaha Galmudug Qoor Qoor, oo ay isku beel yihiin Saadaq.
Xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegeysa in Qoor Qoor uu ku qanciyey Jeneral Saadaq inuu dib ugu soo laabto gurigiisa oo ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, oo uu markii hore deganaa. Si kastaba, Saadaq ayaa weli ku sugan Shiirkole, mana cadda goorta uu kasoo tegi doono inkasta oo uu aqbalay codsiga Qoor Qoor.
Previous articleCiidamada amaanka Dhuusamareeb oo xabsiga dhigay Madaxii Waxbarashada Dhuusamareeb iyo xubno kale oo ka tirsan Bahda Waxbarashada .
Next articleMareykanka oo dib u eegis ku sameenaya Heshiiskii Hubka ee Imaradka Carabta.
Kooxda TPLF oo soo bandhigi doonto ciidammo Soomaaliyeed oo ay ku...
Mala-awaal uu Rashid Abdi, oo Kenyati ah, ku soo qoray Twitterka ayaa sheegayay in TPLF soo bandhigi doonto ciidammo Soomaaliyeed oo ay qabteen? Sidee...
Ciidamada Xooga Dalka oo gacanta ku dhigay Madaxii howlgelinta Al-Shabaab gobolka...
Booliska Norway oo sheegay inay fashiliyeen shabakad abaabulan oo isku...